पछिल्लो परीक्षण अनुसार डा. केसीको रक्तचाप ९०/६०, मुटुको गति १०० छ – RadioMBC
Home > Front News > पछिल्लो परीक्षण अनुसार डा. केसीको रक्तचाप ९०/६०, मुटुको गति १०० छ
३० पुष २०७५, सोमबार १३:२३
इलाम — १६ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीलाई मुटुमा समस्या आएको चिकित्सकले जनाएका छन् । अस्वभाविकरुपमा मुटुको धड्कन बढ्नुका साथै निमोनिया पनि देखिएपछि उनलाई आज बिहान इलाम अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।भर्नापछि भएको प्रारम्भिक परिक्षणको जानकारी गराउँदै मेडिकल सुपरिटेण्डेनट डा. विजेन्द्र कुमार शाहले सत्याग्रहको छैठो दिनमा देखिएको यो समस्या बढ्न सक्ने संकेत गरे। ‘यहि अवस्था रहे हामी उपचार गर्न सक्छौं तर समस्या बढे इलाममा सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ आइसियू, एनएस थेसिया, क्रिटिकल केयर एक्सपोर्ट र मुटुको चाल नियमित गर्ने हाइग्रेड औषधिसमेत छैन।’
डा. केसीलाई पछिल्लो समयमा देखिएको समस्या ‘टन्सिल र फेनेन्जाइटिस विथ राइट बेजल निमोनिया इन सेप्सिस विथ डिहाइड्रेसन विथ डिसइलेक्ट्रोलाइटिमिया विथ इक्टोपिक्ट बिट्स’ भएको शाहाले बताए।
पछिल्लो परीक्षण अनुसार डा. केसीको रक्तचाप ९०/६०, मुटुको गति १०० छ। तर फेरबदल भइरहको अवस्था रहेको डा. शाहले जानकारी दिए। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ८९ प्रतिशत छ। सामान्य अवस्थामा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ। उनको शरिरको तापक्रम भने समान्य देखिएको छ।
अवस्था थप जटिल भए यहाँ उपचार गर्न नसकिने चिकित्सकले जनाएका छन्। त्यो अवस्था आए विराटनगर या धरान लैजानु पर्ने उनले बताए।
इलामको फूलगाँछीमा सत्याग्रहमा रहेका केसीलाई आइतबार नै अस्पताल भर्ना गर्न चिकित्सकले पहल गरे पनि डा. केसीले अस्वीकार गरेका थिए। मुटुको धड्कन बढ्नुका साथै छातीमा निमोनिया भएपछि सोमबार भने केसी अस्पताल भर्ना हुन सहमत भएका थिए।
१५ औं अनशनका क्रममा भएको सहमति अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने माग गर्दै डा. केसीले गत पुष २५ गते बुधबार देखि इलाममा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। सत्याग्रहमा उनी बसेको आज छैठौं दिन हो। दोस्रो दिनदेखि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन्। डा. केसीको हालसम्म ३ पटक रगत चाँच भइसकेको छ।प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ ०९:२३
नेपाली सेनामा रथी पूर्ण चन्द्र थापा सेना प्रमुख बन्ने पक्का
जनयुद्ध दिवस मनाउन वाईसियलले अाक्रामक प्रचार प्रसार थाल्याे
राम्रो काम गर्नेको उचित मूल्याकन र संगठनको छवि धमिल्याउनेहरु संगठनमा नअट्ने : आईजीपी खनाल
दुर्घटनामा नायिका बिना थापाको निधन
पहिरोले अवरुद्ध नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा !!!
बाटाे फेरिएका छन ,लक्ष्य फेरिएकाे छैनन , बर्षमान पुन
०७४ जेठमा घोषणा गरिएको मानपदवी १९ भदौमा वितरण गरिने
गाैसलालाई अाैधाेगिक कृषी नगर बनाउछु /मन्त्री पाेखरेल,
बोल्न नजान्दा नीति शाहको चर्को आलोचना (भिडियो सहित)
चर्चमार्फत पश्चिमा देशहरुले हस्तक्षेप बढाएको भन्दै चीनमा चर्चलाई भत्काउन शुरु (भिडियो)
फ्रान्स विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा !!!